Diyopost.com :: विश्वकप: क्वाटरफाईनल समिकरण पुरा, सेमिफाईनलको लागी यी देशहरु मैदानमा उत्रिँदै ! विश्वकप: क्वाटरफाईनल समिकरण पुरा, सेमिफाईनलको लागी यी देशहरु मैदानमा उत्रिँदै ! - Diyopost.com
विश्वकप: क्वाटरफाईनल समिकरण पुरा, सेमिफाईनलको लागी यी देशहरु मैदानमा उत्रिँदै !
काठमाडौँ । विश्वकप फुटबलमा अन्तिम १६ का सबै खेलहरु समाप्त भएको छ । मंगलबार राति कोलम्विया र इङल्याण्डबिच भएको खेलसंगै क्वाटरफाईनल समिकरण पुरा भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खेलबाट क्वाटरफाईनलसम्म पुग्न आयोजक रुस, उरुग्वे, फ्रान्स, ब्राजिल, स्विडेन, वेल्जियम र इङल्याण्ड सफल भएका छन । दाबेदार देशको रुपमा हेरिदै आएको जर्मनी, अर्जेन्टिना, पोर्चुगल र स्पेन अन्तिम १६ बाट घर फर्किएका छन ।
कोको भिड्दैछन क्वाटरफाईनलमा
उरुग्वे भर्सेज फ्रान्स
सेमिफाईनलको लागी हुने पहिलो खेल निकै नै आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने भएको छ । पहिलो विश्वकपको विजेता उरुग्वे र युवा खेलाडीहरुले भरिएको फ्रान्सविच कडा टक्कर हुने देखिएको छ । यो खेलसंगै विश्वकपको एक उत्कृष्ठ टिमको यात्रा समाप्त हुने छ । फ्रान्सले अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिनालाई ४–३ ले पराजित गरेको हो भने उरुग्वेले पोर्चुगललाई २–१ ले पाखा लगाउदै क्वाटरफाईनलमा स्थान पक्का बनाएको हो ।
अर्जेन्टिनासंगको खेलमा फ्रान्सका १९ वर्षिय किशोर खेलाडी एम्वाप्पेले २ गोल गरि निर्विवाद स्टार बने । आक्रमक खेल प्रदर्शन गर्ने फ्रान्सको रक्षापंक्ति र गोलकिपर पनि निकै मज्वुद रहेको छ । मिडफिल्डमा पाउल पोग्वा, ब्लेव मेट्विडी, एन्जोलो कान्टे लगायतका उत्कृष्ठ खेलाडीहरु रहेका छन । फरवार्डमा एन्टोन ग्रिजम्यान, ओलीभर जिराउड जस्ता अन्तराष्ट्रिय स्तरका ख्याति प्राप्त खेलाडीहरु रहेको फ्रान्स विश्वकप २०१८ को च्याम्पियन बन्न लायक देशका रुपमा देखिएको छ ।
त्यस्तै पोर्चुगललाई घर पठाउन सफल उरुग्वे पनि उत्कृष्ठ फर्ममा रहेको छ । पोर्चुगलसंगको खेल जिताउनको लागी उरुग्वेका स्ट्राईकर एन्डरसन काभानीले उत्कृष्ठ दुई गोल गरेका थिए । फुटबल क्लव वार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लुईज स्वारेज सहित सबै खेलाडीहरु उच्च फर्ममा रहेकोले सेमिफाईनलको पहिलो भिडण्त रोमाञ्चकारी हुने भएको छ । खेल शुक्रबार बेलुका ७ः४५ मा हुनेछ ।
ब्राजिल भर्सेज वेल्जियम
विश्वप्रसिद्ध खेलाडी लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा पिएसजीका स्ट्राईकर नेयमार उत्कृष्ठ खेलाडीको केन्द्रविन्दुमा परेका छन । बेलाबेलामा विवादित बनेतापनि उनको खेलले ब्राजिललाई विश्वकपको उपाधि जिताउन सक्ने अन्दाज धेरैले लगाएका छन । क्वाटरफाईनल समिकरण अन्तर्गत शुक्रबार राति हुने खेलमा ब्राजिल वेल्जियमसंग मैदानमा उत्रिने छ । ब्राजिलमा नेयमारसहित पाउलिन्हो, कउटिन्हो, विलियन, क्यासेमिरो, मार्सेलो लगायतका उत्कृष्ठ खेलाडीहरु रहेका छन । सन २०१४ को विश्वकपमा वेहोर्नु परेका लज्जास्पद हारको बदला लिने लक्ष्यमा ब्राजिल रहेको छ । अन्तिम १६ मा जापान विरुद्ध तिन गोल गरि क्वाटरफाईनल प्रवेश गरेको वेल्जियम पनि यसपालीको विश्वकपमा एक दाबेदार टोलीको रुपमा देखा परेको छ । यी दुई राष्ट्रबिचको खेल शुक्रबार राति ११ः४५ मा हुने छ ।
स्विडेन भर्सेज इंल्याण्ड
सेमिफाईनलको लागी तेस्रो खेलको रुपमा स्विडेन र इंल्याण्ड शनिबार वेलुकी भिड्दै छन । उच्च लयमा रहेको स्विडेनलाई पराजित गर्नको लागी इंल्याण्डले कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएराति कोलम्विया संग भएको खेलमा इंल्याण्डले टाईब्रेकरमा विजय हाँसिल गरेको थियो । यता स्विडेनले स्विजरल्याण्डलाई १–० गलअन्तरले पराजित गरि क्वाटरफाईनलमा इंल्याण्ड संगको भेट पक्का गरेको छ ।
रसिया भर्सेज क्रोयशिया
खेलको शुरुवाति चरणदेखी नै चम्किएको आयोजक टोली रुसलाई घरेलु मैदान र घरेलु दर्शकको राम्रो साथले अगाडी बढाएको छ । उत्कृष्ठ गोल किपिङ, मज्वुद रक्षापंक्ती र गतिलो एट्याकिङको कारण रसिया क्वाटरफाईनल सम्म आईपुगेको छ । विश्वकप ईतिहासमा यहाँसम्म आईपुग्नु रुसको लागी पहिलो पटक हो । क्वाटरफाईनलमा रुसले मज्वुद टोली क्रोयशियाको सामना गर्ने छ । क्वाटरफाईनलको अन्तिम खेलको रुपमा रहेको यस खेल नेपाली समयअनुससार शनिबार राति ११ः४५ मा हुने छ ।